Onodu aku na uba nke Athens | Njem zuru oke
Ezigbo Atens | | Atenas
Athens bụ ebe etiti akụ na ụba, ndọrọ ndọrọ ọchịchị na ọdịbendị na Gris. Agglomeration nke Atens na-achịkọta nnukwu akụkụ nke ụlọ ọrụ mba ahụ, yana akwa, mmanya, ncha, kemịkal, akwụkwọ, akpụkpọ anụ na ọkpụite. N'aka nke ọzọ, ụlọ obibi akwụkwọ, ụlọ akụ na njem bụ ihe dị mkpa na akụ na ụba ya. Banyere mba ndị ọzọ na-asọ mpi na akụnụba, Gris nwetara uru nke ya site na isonyere European Union na 1981.
N'ezie, Nbanye Greece na European Union wetara ego ọhụrụ n’obodo ahụ. Taa akara akụ na ụba ya bụ akara nke ngalaba ọha na eze yana mmụba na ngalaba agụmakwụkwọ. Egwuregwu Olympic na Athens nyere aka mee ka akụ na ụba ya sie ike. Egwuregwu Olympic ndị a bụ injin nke ọtụtụ ọrụ akụrụngwa na obodo.
Na 2009, Nsogbu akụ na ụba ụwa metụtara Gris n'ụzọ siri ike. Ọnọdụ nke ego ọha na eze na ụgwọ ya ahapụghị nhọrọ ọzọ karịa iwebata ihe mgbochi mgbochi nke IMF kwadoro yana enyemaka ego sitere na European Union. Gris gafere oge nsogbu n'oge na-adịbeghị anya iji zere enweghị ego nke mba ahụ. Ihe gọọmentị butere bụ iji 10% belata mmefu ọha na eze.
Na nloghachi, enyere enyemaka site na European Union yana International Monetary Fund na mba ahụ. N'aka nke ọzọ, Gris kwere nkwa iweda mpe ya site na 13,6% rue 3%. Mụ amaala, n'ihi nsị ahụ, mụbara ọgụ na ngagharị iwe iji gosipụta usoro ndị a dị ka adịghị mma. 20% nke ndị bi na-ebi n'okpuru ịda ogbenye na Gris. Mbelata nke mmefu ọha na-eme ka ndị mmadụ sie ike, n'eziokwu, nsogbu a na-ebelata.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Njem zuru oke » Akụ na ụba nke Atens
Nleta na Katidral nke Pisa, Romanesque na ochie
Omenala UK nri